Du bist hier: Startseite / Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana khasab igu ah in aan ilaaliyo...
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2016-12-23 08:18:232016-12-23 08:18:23Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana khasab igu ah in aan ilaaliyo walaashayda si aan u hubsado in aysan banaanka ula bixin wiilasha. Waa in ay ugu dhaqmaan si wanaagsan dadka dhexdooda. Midaan waxay ka tahay arin sharafeed qoyskayga. Waalidiintaydu waxay dhahaan in aan anigu masuul ka ahay. Inta baddan arintu waa mid dhib baddan. Maxaa ila habboon in aan sameeyo?